अनुहार सुन्दर बनाउन घ्यू, कसरी लगाउने ? - Nagarik Today
होम » अनुहार सुन्दर बनाउन घ्यू, कसरी लगाउने ?
शुद्ध घ्यू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । आयुर्वेदमा पनि घ्यूको फाइदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यसँगै छालाका लागि पनि घ्यू फाइदाजनक मानिन्छ । घ्यूमा फ्याटी एसिड, स्याचुरेटेड फ्याट, मोनो स्याचुरेटेड फ्याट, भिटामिन ए, बी, डी, के र ई आदि पाइन्छ । यसका साथै, घ्यूमा हिलिङ प्रोपर्टी पनि हुन्छ । जसले छालालाई निकै धेरै फाइदा गर्छ । छालामा घ्यू प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसमा अन्य चीजहरु मिसाएर लगाउँदा झनै धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
एक चम्चा घ्यु, एक चम्चा काँचो दूध र एक चम्चा चिनी मिसाएर स्क्रब बनाउने र त्यसले २ मिनेट अनुहारमा स्क्रब गर्ने । त्यसपछि अनुहार सफा गर्ने गर्दा अनुहार चम्किलो हुन्छ ।